Isahluko se-2992- 2993 seDish esona siNgcono saCold | XperimentalHamid
funda Isahluko 2992 - 2993 yenoveli Isisitya esiBanda kakhulu sokuBanda simahla kwi-Intanethi.
Landela i-US yoHlaziyo lwamva nje
Ukuhanjiswa ngesiquphe ngokungathandabuzekiyo kwabenza bonke abasebenzi be-Martial God Temple ukuba boyike.
Yayiphantse okokuqala ndadibana nesimo esinjalo sokuphantse ndilungele imfazwe.
Xa uMarko wagijimela eYanshan okokugqibela, ngenxa yokufika ngesiquphe, iMartial God Temple yayingenalungiselelo kwaphela.
“Ungathini, mzala uMarko, ubonakala umhle?”
Kwivenkile esembindini wedolophu, uDenren Ye uphume nje kwigumbi elifanelekileyo emva kokutshintsha iimpahla zakhe.
Ngeli xesha, wayolula umzimba, ebonisa ubuhle bakhe njengoMarko.
UMark wanqwala wathi ngoncumo: “Kulungile.”
“Isimilo sakho siyafana noXiaolei. Uyinxiba ngokufanelekileyo. Ndiyakholelwa ukuba uXiaolei uzakubonakala emhle naye. ”
“Nguwe wedwa, yiza uyifake.”
Emva kokukhetha isangqa, uMark ekugqibeleni wagqiba ekubeni athenge le lokhwe imnyama njengesipho kuXu Lei.
Nangona kunjalo, emva nje kukaDenren Ye usandula ukutshintsha le.
Ngequbuliso inani elikhulu labantu bathululela kwigumbi lokungenisa ivenkile.
Babenxibe iisuti kunye neesilazi ezimnyama ezigqume isiqingatha sobuso babo.
Okwangoku bavele, umoya ongqwabalala ugcwele yonke ivenkile.
"Vala le ndawo, akukho mntu unokuza ngaphandle kwemvume yam."
Phakathi kwesihlwele, inkokeli yanika imiyalelo.
Kungekudala, iikhawuntari ezininzi kufutshane noMark zaphelisa ukuhamba kwabantu.
NguMark noDenren Ye kuphela ababesele kumhlaba weNuoda.
Xa ujongene neli dabi ngequbuliso, uDenren Ye wayenengxaki kancinci.
Nangona kunjalo, ngapha koko, yayinguKapteni Qinglong, waphakama ngokukhawuleza, wajonga abantu abaphambi kwakhe ngokundilisekileyo.
Nangona kunjalo, akukho mntu wamhoya kwaphela.
Ngaphandle kokukhetha, amehlo aba bantu awela kumfana ophambi kwakhe.
“Denren Ye, buya umva.”
Aba bantu abayonto onokumelana nayo. ”
UMark wabonakala ngathi ubonile ukuba ngubani omnye umntu kwaye wabiza uDenren Ye.
Kwangelo xesha, uphakamise intloko wajonga kwinkokeli, ilizwi lakhe elibandayo, kunye nengqele eqhaqhazelis 'amazinyo, wathula wathi: "Idabi elikhulu kangaka?"
“Andimazi umakhulu uHaotian, ufuna ukwenza ntoni?”
“Ndimele ndikubuze le nto!” UTang Hao uze ngamehlo axhalabileyo.
“Phawula, ufuna ntoni? Ufunani?"
"Ubulele nosapho lakwaLu, kwaye neJiangbei Martial Arts ichithwe sisiqingatha sakho."
Nditsho noNalu Hua, inkundla yobugcisa bemfazwe yambulala ngokweminqweno yakho. ”
"Ngapha koko, uMartial God Temple ugqibe ekubeni angakuphenduli."
“Kufuneka ulibethe isibhakabhaka ukuze waneliseke?”
U-Tang Hao wayenomsindo kwaye enexhala, kwaye wambuza uMarko.
UMark wayedidekile akuva oku: “Andazi ukuba uthetha ukuthini.”
Sukuzenza ongaphantsi. ”
“Ngaba uza eGritsberg ukufumana iimpazamo kwakhona?”
"Ngaba uyafuna ukubulala uYanshan kwakhona kwaye uphazamise itempile yam?"
“Ma De, andisadlali, akunjalo?”
Utshilo kabukhali uTang Hao.
Wadideka ngakumbi uMarko: “Uthetha ngantoni?”
Ndifikile eGritsberg ukuza kubona udadewethu. Kutheni ndaya eYanshan ndizokukhathaza? ”
“Ungandikhohlisi, iinkcukacha zakho zicacile kule Martial God Temple. Umntwana wakho okuphela kwakhe, uphi udadewenu? Asinguye yedwa umzala wakho osecaleni kwakho? ” U-Tang Hao akazange akholelwe konke konke.
UDenren Ye ucacisile: “Ningaqondi kakuhle. Umzala wam uMark nyani weza kutyelela izalamane eGritsberg. Ebengathethi enye into. ”
“Jonga le lokhwe, sisipho umzala wam asikhethile ukusinika.”
UTang Hao wothuka. Ukubona ukuba uDenren Ye khange abonakale ngathi uyaxoka, umsindo wokuqala wanyamalala kancinci.
Waphinda wajonga uMarko waza wambuza: “Ngaba ngokwenene undwendwele izalamane zakho?”
Ayizelanga kwenza ngxaki apha? ”
UMark wakhupha amehlo akhe ngequbuliso.
Uthetha njani lo mfo?
Iimvakalelo zisemehlweni abo, uMark ngumntu ongazinzanga? Yintoni injongo yolondolozo kuzwelonke?
Emva kokuba uMark echaze ephindaphinda ukuba uza eGritsberg nje kuphela ukuza kutyelela izalamane, uTang Hao weva isijwili.
Kwafumaniseka ukuba yayisisilumkiso sobuxoki.
“Kulungile ukutyelela izalamane, kulungile ukutyelela izalamane.”
"Khawuleza ubuye emva kokutyelela izalamane."
"Nawe ke, yiza kancinci eGritsberg kwixa elizayo."
“Ma De, ndiyoyika wena.”
“Ngoku ndiyoyika xa ndikubona.”
Umthombo "Ukubuya komkhwenyana olahlekileyo":
“Mzala Maka, ndiyakuthanda kakhulu.”
Naphi na apho uya khona, zonke zizinto ezitsala amehlo. ”
Ukungena nje kwam eGritsberg, abanye abantu boyika ukulala. ”
"Eli hlobo ligqats 'ubhobhoyi likhulu kangangokuba ngumzala kaMark kuphela onobunzima."
Ngeli xesha, uTang Hao nabanye babesele bemkile.
Ukubona abo bashiya ngasemva, uDenren Ye wancuma ngobudenge, ucinga nje ukuba kumnandi ngokungaqhelekanga.
Umzala wam ufike nje eGritsberg wathenga iimpahla eMall, ezenza ukuba iMartial God Temple yoyike kakhulu.
Inokubonakala ukuba uMarko woyika abantu abadala kwiTempile kaThixo yeMfazwe.
“Ucinga ukuba yintoni le ilungileyo?”
UMark wakhupha amehlo wathetha engenakunceda.
UMark akathandi ukuqatshelwa. Endaweni yokuba ajonge yonke imini, angangumlingiswa omncinci ongaqwalaselwanga.
Kule meko, iya kusindisa iingxaki ezininzi.
Kodwa uMarko wayesazi ukuba njengoko eveza ngokuthe ngcembe umda wakhe, kwakungasekho ukuzimela ebumnyameni ngaphandle kokubonwa njengangaphambili.
Umthi mhle ehlathini, kwaye umoya uza kuwutshabalalisa.
Xa uwazi kakuhle amandla, izinto ezininzi sele zingazibandakanyi.
“Masibuye siye kwaXu.”
"Xa ligqityiwe ishishini, buya umva kwangoko."
"Ukuze abantu abathile baseYanshan bangalali."
UMark wajonga kwicala likaYanshan, wanikina intloko kwaye wancuma.
Bathe besathetha behleka, bobabini bayishiye i-mall bebaleka besiya apho bekukho indlu kaXu.
Nangona kunjalo, xa uMark wabalekela eXujia Manor, wafumanisa ukuba bekugcwele iimoto ezipake ngaphandle komnyango.
“Mzala Maka, loluphi usuku olukhethekileyo namhlanje?”
“Ngaphandle koko, kutheni iimoto ezininzi kangaka zimile ngaphandle komnyango?”
"Ngaphezu koko, kubonakala ngathi zininzi iimoto zangaphandle."
UDenren Ye wajonga iipleyiti zamanye amazwe ezingaphandle komnyango kwaye akazange akwazi ukuzibamba.
UMark ngokwendalo wayengazi, kodwa wanikina intloko: "Ngena ujonge, ngokwendalo uzokwazi."
Ngeli xesha, iholo losapho lakwaXu.
Igumbi likaNuo Da lalisele ligcwele ngabantu.
Ukujonga macala onke, bonke bangabadala abakwintsapho yakwaXu.
Ingakumbi indoda endala ehleli kwesona sihlalo siphambili, iinwele ezingwevu namashiya amangalisayo. Ukubheka ngeenxa zonke kuye kwamjonga ngentlonipho kunye nentlonipho.
Ewe, lo mntu ngoyena mdala kunabo bonke kusapho lakwaXu, uXu Wenqing.
Ukuthetha ngoXu Wenqing, wayenobudlelwane noMark.
Ukufika kukaMark okokuqala kwa-Xu, waphazamisa itheko lika-Xu Meifeng lokuzalwa kwaye ngenkani wamthatha u-Xu Lei kwa-Xu.
Ngelo xesha, uXu Wenqing waphuma wazokuvimba, ethembele kubadala ukuba athengise endala, ekhohlisa ukuthembela kubungangamsha babadala bokucinezela uMarko ukuba abuye umva.
Kodwa uMarko wayengakhathali ngale nto, wakhaba uXu Wenqing waguqa ngqo emhlabeni.
UMark akazange ayikhabe kancinci, nasemva kwexesha elide, imilenze kaXu Wenqing yayingahlambulukanga, ngoku wayehamba enesiqhwala.
“Utatomkhulu wesibini, oomalume bonke balapha, ingaba ingaqala intlanganiso yosapho?”
Ecaleni kweXu Wenqing, kwakukho isibini samadoda nabafazi behleli ngoxolo.
Omnye wabo ngumzala kaXu Lei, uXu Meifeng.
Omnye umntu ujongene ubuso ngobuso kwaye kubonakala ngathi akafani nosapho lukaXu.
Kodwa lo mfana wayenxibe kakuhle, kwaye izixhobo zakhe zazingaqhelekanga. Ngobushushu bakhe nenkangeleko yakhe, uyabona ukuba lo mfana ukwasekhaya sisityebi.
Bobabini baziphatha ngokusondeleyo, baxhomekeke komnye nomnye, kwaye babonakala besondelelene njengabathandi.
Kwakungu Xu Meifeng owayethetha ngelixesha.
Ndambona ephakama esihlalweni sakhe, encumile ngelixa ebuza u-Xu Wenqing imiyalelo.
“Nkosazana, ubuze umntu ongafanelekanga?”
"Ngoku usolusapho kaXu ulinenekazi lesibini, ucela imiyalelo, kwaye kufuneka ubuze nosolusapho wosapho lakwaXu."
“Kodwa ngoku, ugqithile kwi-Xu Family Patriarch wacela ingcebiso kwabanye. Uthetha ukuthini ngale nto? ”
Ngokukhawuleza xa amazwi kaXu Meifeng esiwa, uLin Wenjing, owayekade esecaleni likaXu Lei, akakwazanga kuhlala phantsi.
Ukufixiza, ukubuza uXu Meifeng.
iindidi Urhwebo lwedolophu tags Isisitya esiBanda kakhulu sokuBanda, Eyona Dish Eyona Nto ibalulekileyo iKhratshi yaseChina, Isisitho somdlalo obandayo oGqibeleleyo, Isisithuthi iNovel Cold ebalaseleyo yeTshayina, Eyona Dish iye iNew Cold Novel Ye fan, free, Inveli Post yokukhangela